TACSI GEERIDA MARXUUMAD SAAKIN JIRDE XUSEEN | Araweelo News Network (Archive) -
Anigoo ku hadlaaya magaca reer Cabdi Carwo iyo xaaskeyga Amaal Cumar Carte, waxaan
tacsi u diryaa Reer Jirde Xuseen iyo reer Gaaxnuug Cabdilaahi iyo tafeertooda daafaha dunida ku kala nool geerida naxdinta leh ee ku timid habarwadaagtay marxuumad Saakin Jirde Xusseen oo maanta oo Thalaatha ah Taar. 21/09/2010 lagu aasay magaalada Hargeysa, Xabaalaha Xeedho. Waxaan sidoo kale tacsideynayaa waalidka marxuumada, ehel , asxaab, qaraabada, xigto iyo xigaal meel kasta ooy joogaanba, waxaan leeyahay samir iyo iimaan. Waxaan gaar ahaan u tacsiyeynayaa Maamulka Cisbitaalka Guud ee Hargeysa iyo dhammaan inta Saakin kala soo shaqaysay arrimaha caafimadka ee Soomaliland iyo Soomaliyaba. Sidoo kale waxaan tacsi gaar ah u dirayaa Gobalka Maroodi-jeex ee ay ab iyo hooyaba ka soo jeeday.